Patrick Kluivert oo loomagacaabay agaasimaha cusub ee dhanka ciyaaraha ee kooxda PSG – Gool FM
Liibaan Fantastic July 14, 2016
(Paris) 14 Luulyo 2016 Kooxda PSG ee dalka France ayaa si rasmi ah u xaqiijisay in Patrick Kluivert uu yahay agaasimahooda cusub ee dhanka ciyaaraha.
PSG ayaa u xilsaartay Patrick Kluivert inuu ka shaqeeyo hormarinta kooxda iyo sidoo kale inuu noqdo safiirka PSG ee gudaha yurub iyo aduunka oo idil.
Hadal qoraal ah oo ka soo baxay PSG ayaa lagu yiri:
“Patrick Kluivert wuxuu door muhiim ah ka ciyaarayaa hormarinta kooxda gudaha iyo banaanka, sidoo kale waxaa laga doonayaa inuu cadeeyo istiraatiijiyada kooxda ee dhanka ciyaaraha waqtiga dhaw iyo waqti dheer intaba, sidoo kale waxaa loomagacaabay safiirka kooxda kaas oo ka shaqaynaya xiriirka kooxaha iyo ciyaartoyda kale ee aduunka”.
Dhanka kale weerar yahankii hore ee Barcelona Patrick Kluivert ayaa ka hadlay xilka ay u magacaawday PSG wuxuuna yiri:
“Aad ayaan ugu faanayaa inaan ku biiro koox wayn oo yurub ah sida PSG isla markaana aan kaqabto xil culus oo ah agaasimaha ciyaaraha laga bilaabo maanta, waxaan doonaynaa inaan gaarno hadafyo badan oo aan ka shaqaynaynaa xaqiijintooda”.
Raul: Ronaldo kaddib Real Madrid nolol ayaa u jirta